Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.3.3 Cost
Nnyocha ndị e mere na-adịghị free, na nke a bụ n'ezie mgbochi.
N'ihi ya, anya, m na nkenke enyocha ngụkọta e mere na njehie kpuchie, nke onwe ya bụ isiokwu nke akwụkwọ ogologo agwọ ọrịa (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Ọ bụ ezie na nke a kpuchie bụ keukwu, ọ na-adịkarị na-akpata na-eme nnyocha na-ahapụ ihe dị mkpa: na-eri. Ọ bụ ezie na-eri-nke a pụrụ tụrụ site ma oge ma ọ bụ ego-na-adịkarịghị n'ụzọ doro anya na ububo ya agụmakwụkwọ na-eme nnyocha, ọ bụ a n'ezie mgbochi na anyị eleghara na anyị nsogbu ha. N'ezie, ihe mere eme nnyocha Ajụjụ ọnụ samples nke ndị mmadụ kama nile bi bụ zọpụta ego. N'ihi ya, na-eri ihe dị mkpa iji usoro nke nnyocha e mere nnyocha (Groves 2004) . A-achụ otu asọpụrụ n'ibelata njehie mgbe kpamkpam eleghara-akwụ ụgwọ ọ bụghị mgbe niile na kasị mma anyị mmasị.
Erughị eru nke onye na ibu na mbenata njehie na-gosiri dị ịrịba ama amụ Scott Keeter na ibe (2000) on mmetụta nke oké ọnụ ubi arụmọrụ iji belata na-abụghị omume na ekwentị nnyocha ndị e mere. Keeter na ndị ọrụ ibe efehe abụọ imekotaotuugbo nnyocha ndị e mere, onye na-eji "Standard" usoro na otu na-eji "rigorous" usoro. Ọ bụ ezie na "rigorous" usoro mere na-emepụta a ala ọnụego nke na-abụghị omume, atụmatụ e mere si ma samples ndị bụ otu. Otú ọ dị, "rigorous" usoro na-eri Olee ihe enyemaka okpukpu abụọ nke ihe were 8 ugboro dị ka ogologo oge. Ọ kaara anyị mma na 2 ezi uche nnyocha ndị e mere ma ọ bụ 1 pristine nnyocha e mere? Gịnị banyere 10 ezi uche nnyocha ndị e mere ma ọ bụ 1 pristine nnyocha e mere? Gịnị banyere 100 ezi uche nnyocha ndị e mere ma ọ bụ 1 pristine nnyocha e mere? Na ụfọdụ ebe na-eri uru ga-anyị karịa ana eche na, na-abụghị kpọmkwem na-akpata nchegbu banyere àgwà.
Ọtụtụ n'ime ohere kere site dijitalụ afọ na-adịghị banyere eke atụmatụ e mere na o doro anya na ala njehie. Kama nke ahụ, ndị a ohere bụ banyere eke atụmatụ dị ọnụ ala karịa na ọsọsọ, ma eleghị anya, na njehie na-ugbu elu ma ọ bụ ike tụọ. Dị ka ọtụtụ n'ime ndị atụ ke ibuot emi ga-egosi, na-eme nnyocha na-esi ọnwụ a-achụ otu ibu na n'ibelata njehie ahụ n'akpa ndị ọzọ akụkụ nke àgwà na-aga atụ uche si na-akpali akpali ohere. Nyere a ndabere banyere ngụkọta e mere na njehie kpuchie, anyị ga-now-echigharịkwuru ebe atọ bụ isi nke-atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha: ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị onodi (Nkebi nke 3.4), ọhụrụ bịara ibi nwatakịrị mmesho (Nkebi 3.5), na ọhụrụ azum n'ihi na ijikọta nnyocha ndị e mere na dijitalụ metụtara (Nkebi 3.6).